Ingxolo ifunyenwe ngexesha lokufowuna nge-iPhone 8 kunye ne-8 Plus | IPhone iindaba
UYesu uyasika | | IPhone iindaba, iPhone
Abasebenzisi abaninzi be I-iPhone 8 kunye ne-8 Plus baqala ukunika ingxelo ingxolo ecaphukisayo xa besenza iminxeba kwizixhobo zakho. Kuyabonakala ukuba ezi ngxolo zivela ifowuni ephathwayo Kwaye kuye kwafunyanwa kwezinye iimeko ukuba inokuvela nakwisithethi esifanayo.
Nangona ezo bugs zixeliweyo ziyi bambalwa, Siza kuzichaza iinkcukacha ngokusilela ngesandi esingezantsi kwaye sicoce nakuphi na ukuthandabuza okunokuvela ngokubhekisele kuzinzo lwayo njengemveliso ephambili yeApple xa kusungulwa eli nqaku.
1 Ingxolo ngexesha lokufowuna nge-iPhone 8 kunye ne-8 Plus
2 Isoftware glitch
Ingxolo ngexesha lokufowuna nge-iPhone 8 kunye ne-8 Plus
Njengoko kuxeliwe ngabanye abasebenzisi xa besenza umnxeba, nge-iPhone 8 Plus, uyeva ingxolo engathandekiyo kwaye iyacaphukisa uxinzelelo oluchanekileyo lomnxeba, omvelaphi yawo ingaziwa.
Le ngxolo ifunyenwe kokubini xa sisenza umnxeba ngendlela eqhelekileyo, kunye nesiphelo sendlebe kufutshane nendlebe yethu naxa sisebenzisa imowudi yesithethi kule fowuni, nangona le yokugqibela ingakhange ixelwe kakhulu. Ngokuphathelele kwizicelo ezivelisayo, ngokucacileyo, zonke zizonke. Oko kukuthi, ezo fowuni apho a Unxibelelwano lweWiFi, unxibelelwano 4G okanye efanayo okanye a umnxeba welizwi.
Ewe kunjalo, njengoko sisitsho, xa sisebenzisa izicelo zomntu wesithathu, ezisinika amandla okwenza umnxeba IlizwiIP, ezinje ngeWhatsApp okanye iTelegram, kodwa kuye kwafunyanwa ukuba nakwinkqubo yemveli ye Ixesha lokujongana ingxolo isekhona.
Ukongeza, akunamsebenzi nokuba siphi na xa sisenza umnxeba, nokuba kukwindawo evaliweyo okanye kwindawo evulekileyo, ingxolo iyaqhubeka kwaye iyaqhubeka nokuphazamisa umnxeba. Umsebenzisi we-iPhone 8 Plus onale ngxaki uxele oku kulandelayo kuchaza ukuba injani ingxolo kwaye xa ibonwa:
Kukuqhekeka okuphezulu, njengokugqabhuka kwesandi okwenzeka ngokuthe chu kwisithethi sendlebe ephezulu ngexesha lokufowuna. Ezinye iifowuni zilungile kwaye ezinye zinengxolo. Ayivakali kwii-headphone okanye kwisithethi, kuphela ngento yendlebe. Umntu ofumana umnxeba akakuva. Andazi ukuba yile hardware okanye isoftware, kodwa inye into endenze ndacinga ukuba inxulumene nesoftware kukuba ukuba utshintshela kwisithethi imizuzwana embalwa emva koko ubuyele kwindlebe, iintanda zisonjululwe ixesha lokutsala umnxeba. Ukuba le yayiyingxaki yehardware yentloko, ukwenza oku akufuneki kwenza umohluko.
U-Apple sele ekuqaphele ukusilela Sele ndizithumele izisombululo ezinokubonisa ukuba ukusilela akubangelwa zizixhobo zekhompyuter kodwa ngokuchaseneyo. Impazamo ibonakala ikwifayile ye isoftwe Ke sele ukhangele indlela yokulungisa. Okwangoku, esona sisombululo sinikezelwayo koku buyisela isixhobo ngoseto lwefektri kwaye uqalise inkqubo yokuqalisa nge-backup yethu ye-iCloud.
Ngaphandle kwezi ntsilelo zixeliweyo, uninzi lwabasebenzisi abakwazileyo ukuthenga esi sigqeba khange babone le ngxaki, ke ayingomntu othusayo. Ukuza kuthi ga ngoku, idatha kolu tshintsho yaziwa kuphela kwi EUnited States, Kodwa ukuba ungumsebenzisi we-iPhone 8 Plus eSpain kwaye uqaphele nasiphi na isandi esingaqhelekanga, sibhalele kumagqabaza ukuze ufunde okungakumbi malunga nengxaki.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » Ingxolo ifunyenwe ngexesha lokufowuna nge-iPhone 8 kunye ne-8 Plus
Kanye le uyithethileyo iyenzeka kum kwi-iPhone 8 Plus yam.
Ukuba ufuna ulwazi ngakumbi ndingakuvuyela ukukunika.
Injongo yenkosi !! ezi ndaba zineveki enye ubuncinci. Sele zilungisiwe nge-ios 11.0.2
UJose Míguez sitsho
Kule veki bendingenalo elinye icebo ngaphandle kokuthumela i-iPhone 7 yam kwiNkonzo yobuGcisa phantsi kwewaranti emva kokufumana ezi mpazamo zilandelayo:
-Siri wayeka ukusebenza.
-Imiyalezo emanyelwayo kwiMessage yayihamba nengxolo eyabangela ukuba umyalezo uhlale ngasemva kwaye ungaqondwa.
-Ukuba usebenzisa ikhamera yangaphambili, umfanekiso ubonakala ugqibelele, kodwa iaudiyo yayinomgangatho ombi njengakwimessage.
Into enomdla kukuba, iifowuni kunye nemiyalezo yeaudio evela kuWhatsApp kunye neTelegram isebenze ngokugqibeleleyo (eya kuthi icime ingxaki yehardware ekuqaleni)
Kwangokunjalo, xa ndidibanisa ii-headphone okanye iParrot yemoto yam, yonke into ibuyele esiqhelweni noSiri kwaye ingxolo yaphela.
Kwisiphelo esineenyanga ezisixhenxe kunye nexabiso le-iPhone 7 Plus, yonke into kufuneka isebenze ewe okanye ewe.
Ngokucacileyo ndiyibuyisile kumzi mveliso ifumana iziphumo ezifanayo.
Ndicinga ukuba izakufika kum ngoMvulo olandelayo. Kwiwebhusayithi yokulungisa i-Apple babonisa ukuba "imveliso ilungisiwe kwaye yathunyelwa." Masibone ukuba ihamba njani.
Phendula kuJose Míguez
UJanire Bartolome Lecosaiz sitsho
Nantsi 1 ene-iphone 8 kunye nohlobo lwamva nje lwe-ios kwaye ingxolo iyaqhubeka. Ngomso ndiza kubonana kwivenkile esemthethweni
Phendula uJanire Bartolome Lecosaiz
UMIGDELINA GAXIOLA RUELAS sitsho
Kwenzeka into efanayo kum ndivela eMexico kwaye xa nditsalela umnxeba abandiva okanye bandiva ngomsindo omkhulu ukuba bangayisombulula le nto kunokuba luncedo
Phendula MIGDELINA GAXIOLA RUELAS
Into efanayo yenzeka kum nge-iphone 7 plus. Ndivuselele i-IOS 12.2 kwaye iingxaki ziqale kwi-Factime, i-WhatsApp kunye neefowuni zevidiyo ngokubanzi, kufana nesithethi, ukuba omnye umntu akayiboni kodwa ingxolo inkulu kakhulu. Ndingenza ntoni?
UFlorence Viglione Lara sitsho
Molo, ndinguFlorence waseArgentina, izolo ndithenge i-iPhone 8 kwaye xa ndithetha emnxebeni yenza ingxolo echazwe apha ngasentla. Xa ndisebenzisa i-headphone iyayeka ukuyenza. Into ekufuneka ndiyenzile?
Phendula uFlorencia Viglione Lara
Ndiyamangaliswa kukuba ezi zimvo ndizifundayo! La magqabantshintshi avela kwiminyaka emi-2 eyadlulayo kwaye yinto enye eyenzekayo kwi-iPhone 8 Plus yam, abandiva kakuhle kwaye yenza ingxolo enkulu, imiyalezo ye-wassap yiva ingxolo kuphela kwaye ndiyakwazi ukuthetha nokuthetha ngokufaka iiheadphone zam. Ngaba ukhona umntu owaziyo into
UFERMINA SERRANO ESCOBAR sitsho
KULUNGILE, NDITHENGA IPHONE ELITSHA ELIYINTSHA 8 KWI-EBAY KWAYE KUCIMA UKUBA I-APPLE ITHI ANDINASIQINISEKISO KANYE INGXAKI YAM YILE:
XA NDENZA NALUPHI UHLOBO LWEFONI KWISIFLOKO SENTLOKO, KUKUFANELE UKUFUMANA INGXAKI YEBHokhwe KUNYE NENGXOLO, ANDIYAZI INDLELA YOKUSOMBULULA LE NGXAKI KUNYE NOKUHLAZIYA OKUGQIBELA 14.3
Phendula FERMINA SERRANO ESCOBAR
UMaria contreras sitsho
Ndivela eChile kunye ne-Iphone 7 xa ndisenza umnxeba kukho ukuphazamiseka kwelizwi eliphazamisa umnxeba, kungacaci kodwa kuyacaphukisa xa umamele.Kukho isisombululo sale ngxaki.
Phendula uMaria Contreras
Iimpondo ze-iPhone X, uphawu lwayo olutsha